Laba arrimood oo Quraanku ka warramay oo ka yaabisay Aduunka! Gaaldiid
Bogga Hore > Projects > Laba arrimood oo Quraanku ka warramay oo ka yaabisay Aduunka!
1 Mucjisada 1 aad: Atomka waa laga sii yaryahay.
2 Mucjisda 2 aad: Wax kasta lamaane ayaa laga abuuray.
Mucjisada 1 aad: Atomka waa laga sii yaryahay.
Waagii hore dadku waxay rumaysnaayeen in walaxda ugu yar walxaha inay Atom, hase ahaatee waxa cadaatay in fikradaasi qaldanayd. Maanta waxaynu ognahay in walaxdu ka koobantahay Electron, Proton iyo Neutron. Hadana markii cilmi baadhis lagu sameeyey Neutronka iyo Proton ka waxa la ogaaday in ayaguna ay ka samaysan yihiin qurbayaal la dhaho Quarks. Si kastaba ha ahaatee Afar iyo Toban qarni kahor ayaa Quraanka Kariimka ah lagu sheegay in Atomku aanu ahayn walxada ugu yar ee maatarku ka abuuranyahay. Allah wuxuu leeyahay:
“Wixii Xaala ood ku Sugan tahay wixii quraana ood Akhrin, wixii camala ood falaysaan waan idin la joognaana (ognahay) markaad dhex galaysaan, kama Qarsoona Rabigaa waxa yar (Atom) oo ku jira Dhulka dhexdiisa iyo Samada toona, iyo wax kasii yar taasna, iyo wax ka wanynaba (haday jiraanba) Kitaab cad bay ku sugnayihiin”
Dabcan Ilaahay wuxuu si cad u qeexay in Atomka ay jiraan walxo kasii yaryar, waxayna aayadani soo degtay 1400 oo sanadood kahor, Waxa kaliya oo inala haboon waa inaan nidhaahno SubxaanAllah.
– Fiiro gaara: Kalimada (ذَرَّةٍ), darrah macnaheeda carabtu waxayu adeegsn jirtay wixii indhahoodu qabtaan waxa ugu yar sida qudhaanjada yaryar iyo wixii lamid ah, balse xilligii la ogaaday Atomka waxa loo baxshay Atomka kalimada (ذَرَّةٍ) sababtoo ah waxay agtooda ka ahayd waxa ugu yar ee ay ogyhiin. Xitaa hadii muran la galiyo in eraygaasi macnaheedu yahay qudhaanjo yar, wuxuu Rabi cadeeyey in ay jirto waxyaalo kasii yaryar oo uu ALlah ogyahay.
Mucjisda 2 aad: Wax kasta lamaane ayaa laga abuuray.
Mudo 100 sanadood kahor ah, dadku waxay rumaysnaayeen in bani-aadamka iyo xayawaanka oo kaliya laga abuuray lamaane (pairs), lab iyo dhidig. Hase ahaatee maanta waxaynu ognahay in dhamaan nooluha iyo maatarkuba ay ka kooban yihiin lamaanayaal, (Male & Female, Positive & Negative, Electron & Proton) Allahna wuxuu leeyahay:
“Waxaana (xumaan) ka nasahana Allahii abuuray azwaajka (noocyo/lamaanayaal) dhamaantood oo ah waxa dhulka soo biqlyo iyo naftoodaba iyo wax ayna ogayn.” [Yaasiin:36]
Dabcan aayadan waa aayad mucjiso ah, wuxu Rabi (swt) leeyahay, wuxuu abuuray dhamaantood waa lamaanayaal, (lab iyo dhidig, togan ama taban, + ama -) waxa kamid ah kuwa lamaanayaasha leh dhirta, nafahooda oo looga jeedo bani-aadamka, iyo waxyaalo kale oo aynaan ogayn.
Dhowaan waxa la ogaaday in dhirtu ka koobantahay lab iyo dhidig, sidoo kale xitaa dhagxaanta ayaa ka kooban lamaanayaal is haysta sida Electron iyo Protron. Waxyaalaha aan la ogayn waagii hore ee hadana lamaanaha ka kooban waxa kamid ah roobka; Roobku wuxuu ka koobanyahay + iyo -, hadii aanay labadaas charge is haysanin wax roob ah muu soo di’i lahayn. SubxaanAllah, Rabi isagoo si wayn usii cadaynaya wuxuu ku leeyahay aayad kale:
“Wax walbana waxaan ka abuurray laba nooc/lamaane, si aad ugu waana qaadataan.” [Daariyaat:49]
Run ahaantii aayadan sharafta leh ayaa si waafiya u sheegtay in nooluha iyo ma noolayaashuba ka koobanyihiin lamaanayaal, waxa aan lamaane lahayn oo kaliya waa Allah subxaanahu wa tacaala.
Fiiro gaara: Lamaanaha macnaheedu maaha oo kaliya Lab iyo Dhedig ee sidoo kalena waxay noqonayaan laba shay oo isku lidi ah sida Dhulka iyo Cirka, madow iyo cadaan, bad iyo barri, wanaaga iyo sharka, iwm.